China 201 ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara efere rụpụta na Factory | Huaxiao
Ọkpụrụkpụ nke 201 igwe anaghị agba nchara karịrị 1.2mm, nke nwere ụfọdụ acid na alkali na-eguzogide, njupụta dị elu na ihe ndị ọzọ, bụ imepụta okwu dị iche iche, eriri azụ nke ihe dị oke mma. Tumadi eji maka ji achọ anwụrụ, ulo oru anwụrụ, ụfọdụ emighị emi ịbịaru ngwaahịa.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere 201 Na-ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara efere, 201 HRP, PMP
Pallet arọ: 1.0MT-6.0MT
Dị iche n’etiti 201 (L1, J1) na 202 (L4, J4) igwe anaghị agba nchara na eriri igwe
201 na 202 igwe anaghị agba nchara bụ igwe anaghị agba nchara igwe abụọ, nke 200 usoro anaghị agba nchara, kedụ ihe ndịiche dị n'etiti ihe abụọ ahụ? Na mgbakwunye na aha mmụba dị iche iche nke ihe dị iche iche kpatara, kedụ ihe dị iche na ngwa na njirimara pụrụ iche? Ka anyị lerukwuo anya taa.
Na ụlọ ọrụ igwe anaghị agba nchara, 201 na-anọchite anya ihe. Ngwongwo nchara 201, na-ezo aka n'ozuzu okwu maka 201 igwe anaghị agba nchara na nchara na-eguzogide acid. Ngwongwo nchara 201 na-ezo aka nchara nke na-eguzogide ọgwụ site na adịghị ike dị ka ikuku, uzuoku na mmiri, ebe nchara na-eguzogide acid na-ezo aka nchara nke na-eguzogide ọgwụ site na ọgwụ ndị na-ekpo ọkụ dị ka acid, alkali na nnu. Standardkpụrụ ọkọlọtọ mba bụ 1Cr17Mn6Ni5N. Elemental manganese (na nitrogen) nke 201 igwe anaghị agba nchara na-anọchi ụfọdụ ma ọ bụ nickel niile iji mepụta ọdịnaya nickel dị ala nke na-erughị nhazi na ụdị ferrite. Ya mere, ferrochrome ọdịnaya na 200 usoro igwe anaghị agba nchara belatara 15% -16%, ọbụna ruo 13% -14%, ya mere corrosion eguzogide-enweghị atụnyere 304 na ndị ọzọ yiri ígwè.
202 igwe anaghị agba nchara bụ otu n'ime 200 usoro igwe anaghị agba nchara, mba ọkọlọtọ nlereanya bụ 1Cr18Mn8Ni5N. 200 nke igwe anaghị agba nchara bụ obere nickel elu manganese nchara nwere nickel na ọdịnaya nke manganese banyere 8%. Ọ bụ nickel-nickel anaghị agba nchara. 202 bụ akara ndị America, kama 1Cr18Ni9. A na-eji igwe anaghị edozi Austenitic na-eji akwa okpomọkụ na-agbanwe oge ya, ya mere enwere ike iji ya mee ihe ọkụ ọkụ. Iji mee ka austenitic anaghị agba nchara na-agbanwe mgbanwe, ọ ga-ewe iwe dị ọkụ karịa 1000 Celsius C, na 350 Celsius C, usoro ihe eji eme ihe anaghị agbanwe agbanwe, ya bụ, arụmọrụ nke nchara anaghị agbanwe agbanwe. Ọ ga-aza naanị n'ihi okpomọkụ, mana ọ gaghị agbanwe ọtụtụ. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, enwere ike ileghara ya anya. N'ihi nke a, 202 igwe anaghị agba nchara nwere ezigbo elu okpomọkụ na-eguzogide. Ọ bụ arụmọrụ a, a na-ejikarị igwe anaghị agba nchara 202 mee ihe na ịchọ mma ụlọ, injinịa gọọmentị, nchekwa ụzọ awara awara, ụlọ ọrụ nkwari akụ, ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ aka, ebe ọha na eze na ebe ndị ọzọ. A na-eji akụrụngwa na-emepụta ọkpọkọ akpaka dị elu, nke a na-eme site na ntinye onwe ya na ịgbado ọkụ, na-akpụgharị ma na-etolite, ma jupụta nchebe gas (n'ime na n'èzí ọkpọkọ) na-enweghị ihe ọ bụla na-edozi ígwè. Thezọ ịgbado ọkụ bụ usoro TIG na nyocha ntanetị siri ike nyocha ugbu a.
Site na echiche nke ọkwa, 202 karịrị otu manganese na karịa nickel atọ. Na ngwa bara uru, n'ihe gbasara ịba uru, 202 dị mma karịa 201, mana imirikiti ndị ahịa na-anakwere tube ihe eji achọ mma 201 nwere ọnụ ala na uru bara uru dịka 202. 202 nwere chromium na manganese karịa 201, yana n'ibu na corrosion eguzogide bụ ubé mma, ma nditịm na-ekwu okwu, arụmọrụ dị iche n'etiti abụọ igwe anaghị agba nchara abụghị ịrịba, karịsịa na corrosion eguzogide.
Enwere nuances naanị n'elu 201 na 202 igwe anaghị agba nchara, mana a ka nwere ọtụtụ iche na ọnọdụ ahụ. Site na iwebata edemede a, anyị nwere olile anya inyere ndị ọrụ ụlọ ọrụ aka ịchọta igwe anaghị agba nchara nke kwesịrị ekwesị maka ngwaahịa ha mgbe ịzụrụ ngwaahịa, ma melite arụmọrụ ngwa. , na-echekwa ụgwọ efu
Nke gara aga: Nkenke igwe anaghị agba nchara eriri igwe
Osote: 304 304L ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara